Tan iyo corona cusub ee ka oogan Shiinaha, ilaa wasaaradaha dawlada, hoos si dadka caadiga ah, waxaan Kingswel Makiinado ee gobolka oo dhan ku socdaa nolosha, dhammaan heerarka unugyada si firfircoon talaabo inay sameeyaan shaqo wanaagsan ka hortagga cudurka faafa iyo shaqo gacanta ah. Inkastoo our warshad ma aha ee ...Read more »
Macaamiisha Qaaliga ah, Kingswel diyaar u yahay inuu ka qayb qaataan Chinaplas ee 31th 2017 in cadaalad Guangzhou.The waa ka 16 si ay u 19 May. Tirada waab Our waa S01, Hall 11.1. Aad oo dhan ku mahadsan tahay taageerada iyo dareenka for Kingswel oo aan sugi karin in aad ku aragto Chinaplas. Salaan Best, Eric Xu Read more »
2016 Chinaplas Booth Number The for Kingswel Makiinado
waqti Post: Feb-22-2016
Macaamiisha iyo saaxiibada Gacaliye, Kingswel Makiinado la doonayo inuu ka qeyb 2016 cadaalad Chinaplas qaataan Shanghai. Macluumaad tiro waab hoose waa. Aad oo dhan ku mahadsan tahay gargaarka iyo trust in Kingswel Makiinado sanado aad u badan. Ma sugi karno in aad ku aragto 2016 Chinaplas ee Shanghai. In f this ... Read more »
Kingswel la socday inay ka qayb qaataan 2015 Chinaplas ee Guangzhou. wakhti bandhig wuxuu ka yimid xagga 20 May inay May 23 tirada waab Our waa 11.1 S65. Rajaynaynaa in ay halkaas Aragno macaamiisha jir ah oo cusub! Read more »